20 siyaabood oo fudud oo aad maalintaada uga dhigi karto mid wanaagsan
Bogga horeCajiib ah
Mararka qaarkood waxaad rabtaa in lagu mashquulo inta lagu jiro nasashada ama aad qaadato wakhti firaaqo ah. Waqtiyadan oo kale, way sahlan tahay inaad u gudubto rabitaanka inaad telefoonkaaga qabato, shido bandhigga TV-ga, ama aado dukaanka internetka. Laakiin waxaas oo dhan uma badna inay soo celiyaan xoogga. Blogger Trent Hamm waxa uu kugula talinayaa in lagu buuxiyo qaybaha firaaqada ee maalinta waxyaabo fudud oo si uun u wanaajiya noloshaada. Isaga laftiisu wuxuu sameeyaa dhawr shay oo liiska ku jira inta lagu jiro fasaxiisa shaqada, oo wax badan ayuu qabtaa maalmaha fasaxa ah.
1. Banaanka fadhiiso 5-10 daqiiqo adoon mashquulin
Raadi meel raaxo leh oo muuqaal wanaagsan leh. Qaado dhalo biyo ah ama koob kafee ah, laakiin ka tag taleefankaaga. Kaliya fiiri hareeraha oo u fiirso waxyaabaha yaryar. Tusaale ahaan, daawo ilmaha oo baranaya baaskiil wadida. Ama ka dareemo diirimaadka qorraxda maqaarkaaga. Tani waxay kaa dhigi doontaa inaad dareento inaad ku xidhan tahay aduunka kugu xeeran.
2. Soco agagaarka xaafadda
Socodku waa nooc aad u fiican oo ah jimicsi hooseeya. Waxay kaa caawin doontaa inaad kiciso oo aad hagaajiso wareegga dhiigga. Hawo nadiif ah, cadceed iyo fursad aad ku sahamiso agagaarka ayaa ku siin doona tamar.
3. Ku lugee beerta
Tani waxay isku daraysaa faa'iidooyinka socodka gaaban iyo ku jirista dabeecadda. Qubaysyadan kaynta ah waxay dejiyaan oo hagaajiyaan caafimaadka.
4. Cab koob biyo ah
Biyuhu waxay lagama maarmaan u yihiin dhammaan hababka jidhka. Waxay kaa caawin doontaa inaad kacdo oo aad dejiso dareenka gaajada.
5. Samee fidin gaaban.
Ka dib, waxaad dareemi doontaa nasasho badan iyo moobil. Waxa kale oo aad isku dari kartaa iskala bixinta iyo dhegeysiga podcast ama buug-maqalka. Kaliya xasuusnoow inaad diiriso ka hor intaadan tan samayn. Ku orda meesha ama ku bood.
6. Ka deg baabuurka
Waqti ka dib, qashinku wuxuu ku ururaa qolka: duubo, dhalooyin madhan, bacaha, rasiidhada, wasakh kabaha, boodhka dhalada. Waxaas oo dhami kuma ogola inaad ku raaxaysato baabuurka. Tuur qashinka, faaruq dhulka, tirtir dashboardka. Hadda gelitaanka baabuurka waxay noqon doontaa mid aad u farxad badan.
7. Cun wax caafimaad leh
Tusaale ahaan, khudaar ama khudaar. Gaar ahaan aad bay u wacan tahay bannaanka. Qaado muus ama tufaax oo ku fadhiiso bannaanka sida lagu qeexay cutubka koowaad.
8. Qor maalin noloshaada ah
Waqtiyo joogto ah, sawir walxaha ku hareeraysan ama waxaad samaynayso. Tusaale ahaan, 15kii daqiiqaba, nus saac, ama saacad kasta. Kadibna ku rid dhammaan sawirada maalinta hal gal oo ku dar sharaxaad. Tani lafteedu waa mid xiiso leh, ka sokow, waxaad la yaabi doontaa waxa dhabta ah ee aad waqtigaaga ku bixineyso. Waxa kale oo aad u xiiso badan in la daawado sawiradan oo kale dhowr bilood ka dib. Maalin caadi ah oo qumman waxay isu beddeli doontaa dhacdo xusuus leh.
9. Caawi qof adigoon waxba ka sugin
Soo qaado boorso culus, samee wax faa'iido u leh deriskaaga ama kaliya shisheeye. Ma qaadan doonto waqti dheer, laakiin waxay kaa dhigi doontaa inaad dareento fiicnaan.
10. Uruuri waxyaabaha aadan u isticmaalin inaad ku tabarucdo sadaqada
Qaado bac weyn oo geli wax aanad mar dambe isticmaalin. Qof weli wuu isticmaali karaa waxyaalahan. Tani waxay bannaanayn doontaa meel bannaan oo guriga ah waxayna caawin doontaa dadka kale isla waqti isku mid ah.
11. Akhri qayb ka mid ah buug caqli badan
Soo qaado buug ku saabsan mowduuc aad xiisaynaysay muddo dheer. Akhri bogag dhowr ah maalintii oo ka fiirso macluumaadka. Sidan waxaad si tartiib tartiib ah u baran doontaa maaddada oo u oggolaan in fikraduhu ku degaan madaxaaga.
12. Samee fal in badan kugu daalay
Dhammaanteen waxaan leenahay liis wax-qabad oo aan dhignay. Tusaale ahaan, hagaajinta tuubada ama nadiifinta musqusha. Hal shay dooro oo samee. Haddii aadan hal mar wada qaban karin, ugu yaraan bilow. Hore ayaad u socon doontaa, arrimuhuna way fududaan doonaan.
13. Mahadsanid qof ku caawiyay dhawaan.
Haddii wax faa'iido leh ama lagu farxo laguu sameeyay, qaado dhowr daqiiqo oo muuji mahadnaq. Fariin qor oo si daacad ah ugu mahadceli qofka. Aad bay u fiican tahay in la ogaado in kaalmadaada la mahadiyay.
14. Samee safar yar
U rog socodka agagaarka agagaarka wax yar oo tacabur ah. Qaado cunto dhadhan fiican leh, hel meel raaxo leh oo dibadda ku cun. Ha qaadin teleefankaaga si aad uga fogaato waxyaabaha jeedinaya. Is deji oo ku raaxayso cuntadaada.
15. Diirada saar neefsashada 5 daqiiqo.
Indhaha xidh oo xooga saar neefsashada iyo neefsashada. Haddii aad ku mashquulin wax fikrado ah, ku soo celi neefsashada mar kale. Waxay kaa caawin doontaa inaad wax ka qabato welwelka waxayna ku siin doontaa dareen xakameyn iyo degganaansho. Saamaynta mar walba isla markiiba lama dareemo, laakiin waxay ka shaqeysaa yaabab mustaqbalka fog.
16. Qaado qubays dheer ama qooy qubeyska
Caadi ahaan waxaanu si toos ah u fulinaa habkan, annagoo fiiro gaar ah u lahayn dareenka. Wakhtigan qaado, ku raaxayso qubaysiga oo si fiican iskaga maydh. Waxaad noqon doontaa mid aad u faraxsan oo firfircoon.
17. Samee jimicsiyo fudud oo jidhka ah
Waa ku filan inaad shaqeyso 10-15 daqiiqo. Waad kululaan doontaa, maskaxduna waxay sii deyn doontaa endorphins. Isla markiiba ka dib diirimaad noocan oo kale ah, niyaddaadu way fiicnaan doontaa, wakhti ka dib, qaabkaaga jireed ayaa sidoo kale fiicnaan doona.
18. Kari wax gaar ah
Inta badan waxaanu karinaa cuntooyin fudud. Waqti dheeraad ah ku bixi si aad naftaada iyo kuwa aad jeceshahay uga farxiso wax gaar ah. Tusaale ahaan, ka hor inta aanad shiileynin hilibka, ku hayso marinade ilaa saacad ama laba saacadood. Ma aha wax adag, laakiin saxanka la dhammeeyey wuxuu yeelan doonaa dhadhan qani ah. Oo waxaad ku qanci doontaa inaad si macaan guriga ugu cuni karto.
19. Ka fakar wax aad ku shukrinaysaan.
Ka fakar waxyaalaha noloshaada wanaajinaya. Waxay noqon kartaa wax kasta: qof aad jeceshahay, buug wanaagsan, kursi aad jeceshahay, ama cimilo qorrax leh. Ka fakar dhowr daqiiqo waxaad dareemi doontaa farxad.
20. Ku bixi 15 daqiiqo nadiifinta
Tuur qashinka oo meelahooda wax ku hagaajiso. Xitaa tani waa ku filan tahay inaad gurigaaga ka dhigto mid raaxo leh. Muhiim ma aha in guriga oo dhan la hagaajiyo. Nadiifi jikadaada ama goobta shaqada waxaadna ogaan doontaa farqiga u dhexeeya. Inta hawshaasi socoto, waxa ay u badan tahay in aad ka heli doonto waxyaabo kugu dhiirigelin jiray oo ku farxi jiray, balse aad illowday. Sii fursad labaad.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 20 siyaabood oo fudud oo aad maalintaada uga dhigi karto mid wanaagsan!